warkii.com » Harry Maguire Ayaa Ka Fiican Virgil van Dijk Horyaalka Premier League Xilli Ciyaareedkan – Akhriso Xog Cadeyn U Ah
Harry Maguire Ayaa Ka Fiican Virgil van Dijk Horyaalka Premier League Xilli Ciyaareedkan – Akhriso Xog Cadeyn U Ah
Virgil van Dijk ayaa la isku raacsan yahay inuu yahay daafaca dhexe ee ugu fiican dunida laakiin xogta ayaa muujineysa in Harry Maguire uu kaga fiican yahay meelo badan xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League.
Daafaca Manchester United ayaa inta badan xilli ciyaareedkan lagu dhaleeceeyay qaladaadkiisa iyo difaacasho xumadiisa laakiin Van Dijk ayaa isna xalay oo Arbaco aheyd sameeyay qaladkiisii ugu weynaa isagoo gool u hadiyeeyay Arsenal.
Qaladkiisa waxaa ka faa’ideystay Alexandre Lacazette kaasoo kubada dabamariyay goolhaye Alisson.
Taageerayaasha kooxaha kale ee Premier League ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraalo ay ku maadeysanayaan xiddiga reer Holland iyagoo la barbardhigay daafaca Gunners ee u nugul qaladaadka David Luiz.
Sida lagu xusay shabakada Premier League, qaladka Van Dijk waxa uu ahaa midkii ugu horeysay ee uu sameeyo xilli ciyaareedkan ee si toos ah gool u siisa kooxda kale, waana qaladkiisii labaad ee 88 kulan uu u dheelay Reds horyaalka Premier League.
Inkastoo Maguire uu sameeyay qaladaad badan oo ugu danbeyn goolal sababay hadana ma jiro qalad toos ah uu sameeyay oo sababay in gool looga dhaliyo Man United 35 kulan uu ciyaaray horyaalka xilli ciyaareedkan.
Xiddiga Ingariiska ayaa sidoo kale dhowr meelood uga fiican dhigiisa Liverpool.
Waxaa la sheegay in Maguire uu sameeyay 18 block marka loo eego 15 uu sameeyay daaficii hore ee Southampton.
Xiddigii hore ee Leicester City wuxuu kubada u soo celiyay kooxdiisa 67 jeer, halka Van Dijk uu kooxdiisa u soo celiyay 39 jeer, Maguire wuxuu sameeyay 21 taakal oo uu ku guuleystay waana in ka badan sagaal taakal inta uu sameeyay Van Dijk.
Maguire waxa uu sidoo kale Van Dijk ku garaacay kubada madaxa lagu bixiyo inkastoo kooxda Liverpool uu qeyb ka yahay daafac ilaashaday shabaqa kulamada ugu badan islamarkaana laga dhaliyay goolasha ugu yar.